Golaha Taageer Kulmiye GTK, Baaq Nabadeeed
(Hadhwanaagnews) Tuesday, May 15, 2018 09:00:14
Golaha Taageerada Kulmiye waxay arragtidooda ku wajahan ilalinta nabada iyo xasilonida gobolka, waxay baaq nabadeed u fidinayaan beelaha
Sidaynu wada ognahay dhamaan waxa soo noqonoqaysay colaad dhibwayn ku haysa habsami u socodka ama geedi socodka nolosha bulshada reer somaliland ee ku dhaqan degaanada gobolka Sanaaag, gaar ahaan degmada Ceel-afwayn ee Jamhuuriyada Somaliland. Dirirtaas oo si guud iyo si gaaraba u ragaadisay nabad kuwada noolaanshihii beelaha walaalaha ah ee degan deegaankaa. Haddaba iyadoo ay waajib qaran iyo mid umadeedba tahay ilaalinta nabada geedi socodka nolosha iyo ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta reer somaliland sida ku cad Dastuurka qaranka Jamhuuraiyada Somaliland, arintani waxay boqnaha goysay gabi ahaanba hanaankii horumarineed ee qaranaka. Sidaa awgeed.
Golaha Taageerada Kulmiye waxay arragtidooda ku wajahan ilalinta nabada iyo xasilonida gobolka, waxay baaq nabadeed u fidinayaan beelaha walaaalaha ah ee ku diriraya Ceel-afwayn.
Gollahani wuxuu si wallaalnimo iyo dareen aadamanimo ku dheehantahay uga dalbanayaa beelaha walaalaha ah ee Ku dhaqan degaamadaasi, inay joojiyaaan dirirta ka socota degmada Ceel-Afwayn mudada sanadaha ka badan soona jiitamaysay.
Goluhu wuxuu si wayn oo balaadhan uga mahad cellinaya ciidanka qaranka , ciidanka booliska, wasaarada arrimaha guddaha iyo dhamaan muwaadininta reer somaliland ee ka hawl galay joojinta dhiig daadashada xaqdarrada ah iyo waliba jiritaanka nabada ee ka dhex oogan walaalaha muwaadiniinta ah ee shaydaanku ka adeegayo.